Connecting Yangon with Phuket twiceaweek from March 2018 | Yangon Aerodrome
Saturday 21st July 2018 17:47
Pickup/ Drop off
Connecting Yangon with Phuket twiceaweek from March 2018
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (YIA) တွင် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမှ စီစဉ်ပြေးဆွဲသည့် ရန်ကုန် – ဖူးခက် တိုက်ရိုက် ခရီးစဉ်ကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်မှ စတင်၍ တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ပျံသန်းပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန် – ဖူးခက် ခရီးစဉ်သစ်အတွက် ခရီးသည် ၁၀၀ လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်သည့် Embraer E190 / Boeing 737 – 800 NG အမျိုးအစား လေယာဉ်ကို အသုံးပြုထားပြီး ရန်ကုန် – ဖူးခက် – ရန်ကုန် အသွားအပြန်ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၀ မှ စတင်ဝယ်ယူ စီးနင်းနိုင်ရန် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမှ စီစဉ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်သစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ် သည့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အက်ဒမန်ပင်လယ်ရှိ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့် ကမ်းခြေများကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော အားလပ်ရက်အပန်းဖြေ ရာနေရာဖြစ်သည့် ဖူးခက်ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးနေပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော် ၁၅၀ ကို ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် နှင့် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း လိုင်းတို့မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုဧည့်ခံခဲ့ကြပြီး luggage tag အစရှိသည့် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Yangon International Airport (YIA) now directly connects Yangon with Phuket, Thailand with twice-weekly flights operated by Myanmar National Airlines (MNA) starting 25 March 2018.
Utilizinga100-seat Embraer E190 aircraft/ Boeing 737 – 800 NG for the new service, MNA has set the fare foraround trip starting from 210 USD. This new route will undoubtedly boost tourism between Yangon, commercial capital city of Myanmar, and Phuket,apopular holiday destination which is renowned for its excellent beaches and resorts set on the Andaman Sea.
YIA and MNA warmly hosted 150 guests at the celebration event to commemorate the new route, and gifts such as luggage tags were handed out.
Download Press Release [MM]
Download Press Release [ENG]
By Yangon Aerodrome| 2018-03-26T15:42:04+00:00	March 26th, 2018|
Airlines moving from T2 to T1 – Vietjet Air: 12 July 2018
Newly-Opened International Terminal 1 At Yangon International Airport Welcomes Its First Flight
Yangon International Airport unveils new Domestic Terminal (T3) in line with its vision forafuture-ready Myanmar
Eleven airlines to move from YIA Terminal2to Terminal 1 this month
Promotions at YIA: July 2018
Copyright 2016 Yangon Aerodrome